SNL မှ Elon Musk သည် Dogecoin အကြောင်းနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၈ ရက်တွင် Doge ပြိုလဲခြင်းအကြောင်းပြောဆိုသည် - Cazoo
SNL မှ Elon Musk သည် Dogecoin အကြောင်းနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၈ ရက်တွင် Doge ပြိုလဲခြင်းအကြောင်းပြောဆိုသည်။
ပင်မစာမျက်နှာ » ပင်မစာမျက်နှာ » SNL မှ Elon Musk သည် Dogecoin အကြောင်းနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၈ ရက်တွင် Doge ပြိုလဲခြင်းအကြောင်းပြောဆိုသည်။
tag ကို: Dogecoin, Elon Musk
စာဖတ်ချိန် -2minuti
Tesla နှင့် SpaceX ၏ CEO ဖြစ်သူ Elon Musk သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာခေတ်၏အောင်မြင်သောအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုဖြစ်သည့် Saturday Night Live ၏ကျော်ကြားသောအမေရိကန်ဟာသပြပွဲ၏ပူးတွဲတင်ဆက်သူ (ပူးတွဲတင်ဆက်သူ) ဖြစ်သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုမေလ ၈ ရက်ညနေ ၅ နာရီခွဲတွင်အီတလီအချိန်ဖြစ်သည်။
Elon Musk နှင့်မိခင် Mayk Musk
သိသာထင်ရှားတဲ့အကြီးအထောက်ခံသူအဖြစ်သူကမကြာသေးမီရက်များအတွင်းကကြေညာခဲ့သည် သူလည်း Dogecoin အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်, လူတိုင်း၏အကြိုက်ဆုံး cryptocurrency meme ။ လူတိုင်းထင်သည်
အဲဒီအစားဒီဇယားကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ Dogecoin ရဲ့ဈေးနှုန်းဟာ monologue ကုန်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာအနီရောင်ဖယောင်းတိုင်တစ်လုံးနဲ့တစ်နာရီကို ၀.၆၆ ကနေ ၀.၅၃ အထိကျသွားတယ်။
Dogecoin စျေးနှုန်း, အချိန်ဘောင် 1h
ပြပွဲ၏အကျော်ကြားဆုံးအပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောဒန်ဒဏ္Updateာရီဇာတ်ကောင်များဖြစ်သော Norm McDonald ကဲ့သို့သောသမိုင်းဝင် Weekend Update သည် Musk သည်မိမိကိုယ်ကိုပြသရန်ခက်ခဲသည့်ဘဏ္scientာရေးသိပ္ပံပညာရှင် Lloyd Ostertag နှင့်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး Dogecoin ကိုအတိအကျရှင်းပြရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။
"မိုက်ကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ့ကို Dogefather လို့ခေါ်ပါ" Musk က Michael Che ကိုပြောခဲ့သည်။
"(Dogecoin) ဟာအင်တာနက်မှတ်ဉာဏ်ကိုအခြေခံတဲ့ဟာသတစ်ခုအနေနဲ့စတင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုတော့သူဟာတကယ့်ကိုတကယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ပြတ်သွားပြီ" ဟု Musk ကရှင်းပြသည်။
ပြီးတော့သူက Musk ကိုအမှန်တကယ်ဘာလဲဆိုတာထပ်ခါတလဲလဲမေးခဲ့တယ်၊ ဒေါ်လာဘီလ်ကိုသူ့အိတ်ထဲကဆွဲထုတ်ပြီး Musk ရဲ့နှာခေါင်းအောက်မှာဝှေ့ယမ်းလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ cryptocurrency ကတကယ်ဟုတ်သလားလို့တောင်သူ့ကိုမေးခဲ့တယ်။
Colin Jost သည်လှုပ်ရှားမှုထဲသို့ခုန်ချကာ Dogecoin သည်မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုပင်မေးမြန်းခဲ့သည်။
"ဒါဟာငွေကြေးရဲ့အနာဂတ်ပါ၊ ကမ္ဘာကြီးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ့်ဘဏ္financialာရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်" ဟု Musk ကပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးတော့သူက cryptocurrencies ကိုငွေသားနဲ့လဲလှယ်နိုင်တယ်လို့ရှင်းပြတဲ့အခါ Che က "အိုး၊ ဒါဟာတကယ့်ကိုပျော့ညံ့မှုပါ" (တကယ့်ကိုပျော့ပျောင်းတယ်!)
“ ဟုတ်တယ်၊ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်သွားတယ်၊ (လကို! 🚀)
ဒီမှာ SNL မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ elon musk ၏ကလစ်တစ်ချပ်ပါ။ pic.twitter.com/iyXbKH0FPZ
- niffauw (@RustigNiffauw) မေလ 9, 2021
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3400)
€ 849,00 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(204394)
€ 18,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1926)
€ 289,95 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
SumUp Air ကတ်ဖတ်စက်
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1342)
€ 29,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(34432)
€ 129,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(4025)
€ 204,98 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(62042)
€ 5,79 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(11932)
€ 22,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(99809)
€ 14,00 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(4632)
€ 95,00 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(89452)
€ 12,98 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
DVB T2 ဒီကုဒ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်းမြေလက်ခံသူ Full HD 1080P H.265 HEVC ပင်မ 10 ဘစ် အခမဲ့တီဗီချန်နယ်အားလုံးအတွက် လက်ခံရရှိသည်၊ HDMI နှင့် SCART မာလ်တီမီဒီယာ PVR USB WiFi [2in1 Universal Remote Control]
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(255)
(02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(849)
€ 178,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(9521)
€ 16,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(29393)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(56338)
€ 29,90 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(13255)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(218)
€ 216,50 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(5816)
€ 49,86 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
€ 163,00 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(11258)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(44750)
€ 39,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
€ 13,79 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1863)
€ 318,82 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3198)
€ 189,90 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(116294)
€ 14,90 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(31)
€ 59,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(29)
Smartphone Car Holder၊ Beikell Car Phone Holder [360 Degree Rotation] with Adjustable Dashboard and Car Extendable Arm Holder ခိုင်ခံ့သော Sticky Gel Pad
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(45653)
€ 14,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(9523)
€ 15,00 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(6340)
€ 25,49 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(142971)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(141663)
€ 19,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(56776)
€ 24,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(133977)
€ 17,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(68161)
€ 34,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(18084)
€ 8,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Samsung Galaxy A52s 5G စမတ်ဖုန်း၊ 6,5 လက်မ Infinity-O FHD+ မျက်နှာပြင်၊ 6GB RAM နှင့် 128GB တိုးချဲ့နိုင်သော အတွင်းမှတ်ဉာဏ်၊ 4.500 mAh ဘက်ထရီနှင့် Ultra-Fast Charging Black [Italian Version]
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(239)
€ 294,00 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(18534)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(51131)
€ 11,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(54515)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(805)
€ 429,00 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
HAKUSHA USB C ကြိုး၊ [1M] Android အတွက် USB Type C နိုင်လွန် အမြန်အားသွင်းကြိုး Samsung Galaxy S21 Ultra၊ Note 20၊ Z Fold 3၊ Huawei P50၊ Mate 40၊ MateBook၊ Xiaomi Mi 11 Lite၊ OnePlus 9၊ Google Pixel 5၊ Realme
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(4708)
€ 4,99 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(43710)
€ 23,75 (02/07/2022 22:56 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1260)
€ 4,90 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
€ 9,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(386)
€ 19,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
KB Nexa Ants Granules၊ 800g & Home Defense Ants Gel Tube 30 & nbsp; g၊ အနီရောင်၊ 11 & nbsp; x 2,6& nbsp; x 21 & nbsp; စင်တီမီတာ
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1335)
€ 13,24 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
€ 61,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1962)
€ 3,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3248)
€ 25,49 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1248)
€ 12,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(757)
€ 24,89 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(163)
€ 23,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Ultrasonic Repellent၊ ကြွက်များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Ultrasound 2022၊ Ultrasonic Mosquito Repellent၊ အင်းဆက်များ၊ ခြင်များ၊ ပုရွက်ဆိတ်များ၊ ပင့်ကူများ၊ ယင်ကောင်များ၊ ပိုးဟပ်များ၊ ကြွက်များ
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(49)
€ 21,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
လျှပ်စစ်ခြင်ထောင်၊ Taiso2in 1 လျှပ်စစ် ခြင်မီးအိမ် ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ၊ အိမ်တွင်း နှင့် ပြင်ပ မီးဖိုချောင် ၊ ယင်ကောင် ၊ ဖလံ ၊ အင်းဆက် ခြင် များအတွက် ထိရောက်မှု
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(56)
€ 20,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(2088)
€ 9,00 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(20658)
€ 109,00 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
€ 16,35 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(133)
€ 7,80 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1413)
€ 6,89 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
NOKLEAD Indoor Thermometer Hygrometer - အပူချိန်စောင့်ကြည့်ရေးအာရုံခံအာရုံခံကိရိယာပါသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အညွှန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခန်းလေ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော တိကျသောစိုထိုင်းဆမီတာ
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(12625)
€ 13,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(111)
€ 18,90 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(501)
€ 8,50 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1078)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1254)
€ 5,95 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြွက်များနှင့် ကြွက်များအတွက် အဆိပ်၊ အစွမ်းထက်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Ratticidal Topicide ငါးစာ၊ Anise ရနံ့အသစ်၊ ပြင်ပအသုံးပြုမှုအတွင်း အိမ်တွင်း၊ ပိုးသတ်ဆေးများ ကြွက်များကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် ပြင်းထန်သော လုပ်ဆောင်ချက် BlockRat - 300 g
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1915)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1525)
€ 2,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1433)
€ 90,00 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(90)
€ 17,90 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(187)
€ 5,41 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
€ 6,39 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(2569)
€ 14,36 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(5270)
€ 376,75 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Cypermethrin lt. 10 ပျံသန်းခြင်းနှင့် တွားတတ်သော အင်းဆက်ပိုးမွှားများ ခြင်များ
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(645)
€ 24,16 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3112)
€ 11,83 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1597)
€ 49,90 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(2631)
€ 34,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(995)
€ 8,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(462)
€ 38,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1230)
€ 11,40 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(17997)
€ 159,90 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
သစ်ခွများအတွက် Compo Sana မြေ၊ အကောင်းဆုံးပန်းပွင့်ရန်အတွက်5L၊ ဖောက်ထွင်း
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(2326)
€ 6,00 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(200)
€ 29,90 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(515)
€ 47,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(6955)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(87)
€ 9,61 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(266)
€ 12,90 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(360)
€ 37,99 (02/07/2022 19:15 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Binance Africa - မှတ်ပုံတင်ထားသောအာဖရိကသစ်သုံးစွဲသူအရေအတွက်များပြားလာခြင်း